गायक साथी- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २०, २०७५ राजाराम पौडेल
काठमाडौँ — अशोक विगतलाई भुलेर वर्तमानमा मिहिनेत गर्दै भविष्य राम्रो बनाउने ध्याउन्नमा छन् । किनकि उनले यस अगाडि धेरै दु:ख गर्नुपर्‍यो । पढ्ने, खाने र खेल्ने उमेरमा उनले आफैं संर्घष गर्नुपर्‍यो । साथीहरू मिलेर घरबाट टाढा सहरमा जाने, गीत गाउने, गीत गाएर आएको पैसाले आफ्ना केही रहर पूरा गर्ने र घरमा सहयोग गर्ने उनको दैनिकी थियो ।
गत आइतबार बालगायक अशोक दर्जी र आर्यन रेहन (एआर) बुढाथोकी पोखराको लेकसाइडमा भेटिए । उनीहरू लेकसाइडको होटल डयान्डिलेनमा ब्रेकफास्ट गर्दै थिए । उनीहरू छोटो समयमा नै मिल्ने साथी भइसकेका छन् । खाने क्रममा पनि एक–अर्कालाई सघाउँदै थिए । ब्रेकफास्टलगत्तै स्विमिङ पुलमा पौडिए । अशोकलाई पौडी खेल्न साह्रै मनपर्छ । उनीसँग गाउँमा हुँदा खोलामा पौडिएको अनुभव छ । उनलाई एआरले पौडी खेल्न साथ दिए । अशोकले पौडी खेल्न एआरलाई सिकाए पनि । दुवै जना मिलेर स्विमिङ पुलमा धित मरुन्जेल पौडिए । ‘गाउँको खोलामा भन्दा त स्विमिङ पुलमा रमाइलो लाग्यो,’ अशोकले प्रतिक्रिया दिए ।
अहिले अशोकका दोस्ती गायक टंक बुढाथोकीका छोरा एआर भएका छन् । एआर सांगीतिक क्षेत्रमा आएको केही समय भइसकेको छ । उनले हालसम्म ७ वटा गीत रेर्कड गराइसके । रुपै मोहनी, कसरी कसरी, रेलिमाई, माया पिरिमको, झिल्के, अल्लारे जोवनमा आदि गीतमा एआरले स्वर भरेका छन् । ६ वर्षका उनी एपल इन्टरनेसनल स्कुलमा १ कक्षामा पढ्छन् । उनीहरू दुवैजना अहिले मिल्ने साथी भएका छन् । आफूभन्दा सानो भएको कारण पनि अशोकले केही कुरा एआरलाई सिकाउँछन् । दुवैजना बालक भएकाले स–साना कुरामा जिद्दी गर्छन् । चकचक पनि गर्छन् । त्यही भएर उनलाई लिएर हिँड्दा एकजना साथी चाहिन्छ । उनीहरूको डिमान्ड पूरा गर्दै समाल्ने र सिकाउने काम टंकले गरिरहेका छन् । दुवैको सपना ठूलो कलाकर बनेर देशलाई चिनाउने छ । अशोक बोलिरहन मन पराउँछन् भने एआर कम बोल्छन् । बुबा टंक एआर रहमानबाट प्रभावित भएकोले नै छोराको नाम एआर जुराएका हुन् ।
पोखराको छोरेपाटनमा आयोजित डेविसफल सांगीतिक मेलामा आफ्नो प्रस्तुति राख्न उनीहरू पोखरामा आएका थिए । पोखरा विमानस्थलमा उनीहरू दुवै जनालाई आयोजकले स्वागत गर्दै कार्यक्रम स्थलसम्म पुर्‍याए । कार्यक्रम स्थलमा पुगेर उनीहरूले आफ्नो आवाजमा गीत सुनाउँदै दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाए । यसका लागि उनीहरूलाई गायक टंक बुढाथोकीले साथ दिएका थिए । यसअघि पोखराको मालेपाटनमा आयोजित मेलामा प्रस्तुति दिन उनीहरू पोखरा आएका थिए ।
झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. २ भालुखोलाका अशोक दर्जी चर्चामा आएको तीन महिना भयो । विभिन्न कारणले गर्दा अशोकले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेका थिएनन् । अब भने उनले पढाइ र संगीतलाई निरन्तरता दिनेछन् । काठमाडौंको एक स्कुलमा यूकेजीमा भर्ना भएका छन् । अब उनले त्यही स्कुलको होस्टलमा बसेर अध्ययन गर्नेछन् ।
अशोक विगतलाई भुलेर वर्तमानमा मिहिनेत गर्दै भविष्य राम्रो बनाउने ध्याउन्नमा छन् । किनकि उनले यस अगाडि धेरै दु:ख गर्नुपर्‍यो । पढ्ने, खाने र खेल्ने उमेरमा उनले आफंै संर्घष गर्नुपर्‍यो । साथीहरू मिलेर घरबाट टाढा सहरमा जाने, गीत गाउने, गीत गाएर आएको पैसाले आफ्ना केही रहर पूरा गर्ने र घरमा सहयोग गर्ने उनको दैनिकी थियो । कलाकारितामा अगाडि बढ्ने सोच भए पनि कसरी कलाकार बन्ने भन्नेमा उनलाई थाहा थिएन । संर्घष गरिरहेका अशोकका बारेमा जब जानकारीहरू बाहिर आए । फेसबुक र युटयुबमार्फत उनको प्रतिभा आमदर्शकमाझ आइसकेपछि उनको चर्चा बढ्यो । एकाएक सेलेब्रिटी बने । गीत रेर्कड गर्न काठमाडांै झिकाइए । अनि रेर्कड भयो । ‘मनबिनाको धन ठूलो कि धनबिनाको मन’ । यो गीतले उनलाई चिनायो । युटयुबमा १ करोड २० लाखभन्दा बढी भ्युअर पाउन सफल भयो । यो गीतपश्चात् उनको प्रतिभाको तारिफ गर्नेहरू बढ्दै छन् । त्यसैले त युटयुबमा उनीसँग सम्बन्धित सामग्री पछिल्लो समय भाइरल भइरहेका छन् ।
यो अवधिमा अशोक मलेसिया र दुबईका कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् । उनी पोखरामा दुईपटक आइसके । काठमाडांै, झापाका कार्यक्रममा सहभागी बने ।उनीसँग घरमा रेडियो र मोबाइल थिएन । जति गीत सुने, गीतहरू गाडीमा बजेको, पसलमा बजेको, विभिन्न पार्टीमा बजेको, बाटामा हिँड्दा बजेको । यिनै गीत सुनेको आधारमा गीत सुनाउँथे । अब उनको आवाजलाई परिपक्व बनाउन साधनासँगै अगाडि बढ्न शिक्षाको जरुरत पर्ने भएकाले उनको ध्यान त्यतातर्फ मोडिएको छ । अहिले तत्काल गीत रेर्कड गर्ने तयारी नभए पनि एउटा गीत अभ्यास गरिरहेका छन् । अशोकलाई छोटो समयमा कमाएको दर्शकश्रोताको मायालाई निरन्तरता दिन चुनौती छ ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७५ ०८:२४
श्रावण २०, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — सरसर–सरसर उड्छौ साथी  रकहिले तलतल कहिलेमाथि कहिले बन्छौ माछा, गोहीकहिले गर्छौ गडगड रोईकहिले छेक्छौ चन्द्रसूर्य
धर्ती पार्छौ घोर अँध्यारो
कहिले हिँड्छौ सुस्तसुस्त
कहिले हिँड्छौ चाँडोचाँडो
कहिले सेतो, कहिले कालो
कहिले देख्छु जालोजालो
सिमसिम पानी तिमी नै पार्छौ
सेतो असिना तिमी नै झार्छौ
झरझर पानी बनी झर त
सुक्खा बोटहरूमा पर त
सबैले भन्छन् बादलु रानी
कहिल्यै नथाक्ने तिम्रो छ बानी ।
थप केही कोपिलाबाट
फरर चिनियाँ भाषा
मेरो प्यारो बाबा
उद्देश्य के लिनु ? उद्यम गर्नू
विज्ञान बाबु रेग्मी कार्तिक ६, २०७६
२०१९ को जुलाईमा फर्च्युन पत्रिकाले वर्षेनि प्रस्तुत गर्ने विश्वभरिको सबैभन्दा ठूला ५०० कम्पनी (ग्लोबल ५००) को नाम सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त सूचीमा इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकी कम्पनीको...
पूरक भोजनको नाममा ठगी
डा. अरुणा उप्रेती कार्तिक ६, २०७६
अहिले नेपालमा ‘फोर्टिफिकेसन’को हावा चलेको छ । आमजनले खाने खाना पिठो, तेल, चामल आदिमा थरीथरीका भिटामिन, खनिज पदार्थ मिसाएर खान दिने चलन छ । जब सरकारले साधारणजनको...
कृषिलाई भुइँ छोड्न नदिऊँ
कृष्णप्रसाद पौडेल कार्तिक ६, २०७६
दुई वर्षअघि चुनावताका दलहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतापत्र होउन् वा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवार घोषणा यी सबैमा नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने...
गुठी सम्पदा : दोहन कि संरक्षण ?
प्रा. दिवाकर आचार्य कार्तिक ६, २०७६
गुठी परम्पराका सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक–सामाजिक र पुँजीगत–आर्थिक गरी कम्तीमा तीन पक्ष छन् । गुठीले जात्रापर्व र पूजाआजामा, मठमन्दिरको सञ्चालनमा, उत्सवमा र संकटमा, अनि मर्दापर्दा समुदायका सदस्यहरूलाई जोड्छ,...
कृत्रिम मुठभेडका दोषीमाथि कारबाही गर
सम्पादकीय कार्तिक ६, २०७६
गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रहरीद्वारा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएपछि सरकारले दाबी गर्‍यो, ‘प्रहरी र चन्द कार्यकर्ताबीच दोहोरो...
पितृसत्ता, शक्ति–सत्ता र महिला
डा. साधना प्रतीक्षा कार्तिक ५, २०७६
युगौँदेखि समाजमा स्थापित पितृसत्ताले हाम्रो सामाजिक/सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबै पक्षमा यसरी प्रभुत्व जमाएको छ कि यसले पुरुषको त कुरै छाडौं, स्वयम् नारीलाई पनि पितृसत्तात्मक...
आकस्मिक सेवाका सर्तहरू
डा. ढुण्डिराज पौडेल कार्तिक ५, २०७६
आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र...
के राजनीति, के अपराध ?
राजेन्द्र महर्जन कार्तिक ५, २०७६
रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट हुन्छ, एकाध किलोमिटर परको प्रहरी चौकीले सुन्दैन । विस्फोटमा परेर मरेकालाई बोरामा कोचिन्छ र घाइतेहरूलाई बेहोस पारिन्छ, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राजा...
बहकिएको रेल बहस
विशाल चालिसे कार्तिक ५, २०७६
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणसँगै नेपाल–चीन रेलमार्गको बहस फेरि सतहमा आएको छ । भ्रमण क्रममा दुई देशबीच बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त अध्ययनलाई...
संसदीय समितिको अनादर
सम्पादकीय कार्तिक ५, २०७६
कार्यपालिकालाई संसद्‌मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पालना गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । ‘मिनी संसद्’ मानिने यी समितिहरूका निर्देशन तथा सुझावलाई...